LCD mihinjitra LCD Display Series - Mpanamboatra sy mpamatsy LCD Asehoy any Shina
LYNDIAN Smart Blackboard ao ...
Fampisehoana LCD mivelatra LYNDIAN 58 mirefy
LYNDIAN 58 mirefy LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fampisehoana mety tsara ho an'ny toerana malalaka fidirana ho an'ny daholobe, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana automation sy fiara fampidirana fiara ary filalaovana fampidirana fiara. fomba fitadiavana, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
Fametrahana: Fitoerana talantalana, Tendrombohitra ary hijoro eo ambonin'ny latabatra no misy
Ampidiro: USB, Slot SD Card
Kilasy fitaovana: trano fonenana vy
Fitaovana hazavana miverina: ELED
LYNDIAN 49.5 mirefy Miseho LCD
LYNDIAN 49.5 mirefy LCD Display Series Railway LCD LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fampisehoana mety tsara ho an'ny toerana malalaka ho an'ny besinimaro, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana fampidirana fiara sy fiara ary lalao fampidirana fiara sy lalana fomba fitadiavana, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
LYNDIAN 43.8 mirefy LCD Display
LYNDIAN 43.8 mirefy LCD Display Series Railway LCD LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fisehoana tsara ho an'ny toerana fidirana ho an'ny besinimaro, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana fampidirana fiara sy fiara ary lalao fampidirana fiara fomba fitadiavana, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
Fampisehoana LCD mivelatra LYNDIAN 43 mirefy
LYNDIAN 43 mirefy LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fampisehoana mety tsara ho an'ny toerana malalaka fidirana ho an'ny daholobe, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana automation sy fiara fampidirana fiara ary filalaovana fampidirana fiara. fomba fitadiavana, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
LYNDIAN 40.6 inch velarana LCD Display
LYNDIAN 40.6 mirefy LCD Display Series Railway LCD LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fisehoana tsara ho an'ny toerana fidirana ho an'ny besinimaro, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana fampidirana fiara sy fiara ary lalao fampidirana fiara sy fomba fomba fitadiavana, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
Fampisehoana LCD mivelatra LYNDIAN 38.5 santimetatra
LYNDIAN 38.5 mirefy LCD Display Series Railway LCD LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fisehoana tsara ho an'ny toerana fidirana ho an'ny besinimaro, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana fampidirana fiara sy fiara ary lalao fampidirana fiara sy lalana fomba fitadiavana, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
LYNDIAN 37.7 mirefy Miseho LCD
LYNDIAN 37.7 mirefy LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fampisehoana mety tsara ho an'ny toerana malalaka ho an'ny besinimaro, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana fampidirana fiara sy fitateram-piarakodia ary fidirana amin'ny lalana fomba, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
LYNDIAN 37.1 mirefy fisehoana LCD mihinjitra
LYNDIAN 37.1 mirefy LCD Display Series Railway LCD LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fisehoana tsara ho an'ny toerana fidirana ho an'ny besinimaro, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana fampidirana fiara sy fiara fampidirana fiara ary fitetezana lalana fomba, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
Fampisehoana LCD mivelatra LYNDIAN 36 santimetatra
LYNDIAN 36 mirefy LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fisehoana tsara ho an'ny toerana fidirana ho an'ny besinimaro, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana fampidirana fiara sy fidiran'ny fiara ary lalao fampidirana fiara sy wayfinding fomba, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
Fampisehoana LCD mivelatra LYNDIAN 28.6 mirefy
LYNDIAN 28.6 mirefy LCD Display Series Railway LCD LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fisehoana tsara ho an'ny toerana fidirana ho an'ny besinimaro, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana fampidirana fiara sy fiara fampidirana fiara ary fitetezana lalana fomba, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
Fampisehoana LCD mivelatra LYNDIAN 28 santimetatra
LYNDIAN 28 mirefy LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, fanovana habe ny seho lcd, fisehoana tsara ho an'ny toerana fidirana ho an'ny besinimaro, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana fampidirana fiara sy fidiran'ny fiara ary lalao fampidirana fiara sy wayfinding fomba, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
LYNDIAN 24.5 inch Ahinjiro LCD Display
LYNDIAN 24.5 mirefy LCD Display Series Railway LCD LCD Extra Wide Display ， Ity Bar Type Display ity, manova habe ny seho lcd, fisehoana tsara ho an'ny toerana fidirana ho an'ny besinimaro, habe namboarina, tontonana mihinjitra ho an'ny fitaterana, filalaovana fampidirana fiara sy fiara fampidirana fiara ary fitetezana lalana fomba, manolotra fomba vaovao sy vaovao hisarihana ny sain'ny besinimaro. Ny atiny mahaliana miaraka amina efijery malalaka, nivelatra ary mahitsizoro, mba hahatonga ny mpanara-maso roa ho iray satria afaka mitondra sy mandamina ny doka sy ny mpandeha ianao.
Fampisehoana tariby fisaka Smart Interactive, Fanabeazana ho an'ny tontonana interaktif, All in One Interactive Flat Panel, Kitiho ny fisehoan'ny Panel Flat Flat, Fampisehoana tontonana 75 interactive, Mpamatsy Whiteboard mifandraika,